१० तरकारी समृद्ध प्रोटीन्स - PAMPEREDPEOPLENY.COM - स्वास्थ्य
प्रोटीनमा धनी १० तरकारीहरू
घर स्वास्थ्य पोषण पोषण oi-Anvi द्वारा अन्वी मेहता | प्रकाशित: आइतबार, मे ११, २०१,, २०:०२ [IST]
यदि तपाईं सोच्नुहुन्छ कि केवल कुखुरा र अण्डाले तपाईंलाई प्रोटीनयुक्त आहार प्रदान गर्न सक्दछ, फेरि सोच्नुहोस्? त्यहाँ धेरै तरकारीहरू पनि छन् जुन प्रोटीनले धनी छन् र तपाईंलाई दिन सक्छ
तपाईंको शरीरको लागि आवश्यक प्रोटीनको मात्रा। प्रोटीन शरीरलाई चाहिने महत्त्वपूर्ण खनिज हो। सामान्य प्रक्रियामा के हुन्छ भने एमिनो एसिडहरू फ्याटको सहयोगमा प्रोटिनमा बिग्रिन्छ। त्यसकारण, फ्याट बर्न र उर्जा रिलीजको लागि प्रोटीनको आवश्यक पर्दछ।
प्रोटीनयुक्त धनी तरकारीहरू तपाईको दैनिक खानामा समावेश गर्नका लागि लाभहरू प्राप्त गर्न सकिन्छ। प्रोटीनले भरिएको तरकारीहरू थप दिइन्छ। प्रोटीन र अन्य खनिजहरूले भरिएको यी तरकारीहरू प्रयोग गरेर हेर्नुहोस्।
यो एक कम फ्याट युक्त तरकारी हो प्रोटीनको उच्च सामग्रीको साथ। ब्रोकोलीलाई दैनिक जिम खाएर व्यायाम गर्ने व्यक्तिहरूलाई सल्लाह दिइन्छ। ब्रोकलीमा भिटामिन, फाइबर र खनिजहरूको भण्डार घर पनि हुन्छ। लगभग २ ग्राम प्रोटीन ब्रोकोलीको आधा कपले प्रदान गर्दछ।
यो पोषणयुक्त बाक्लो बोट स्वास्थ्यको लागि सचेत र ती अतिरिक्त किलोहरू हेर्न चाहने सबैको लागि राम्रो छ। बोटमा प्रोटिन पर्याप्त मात्रामा धनी छ र आधा कप उमालेको वा पकाइएको शतावरीमा २ ग्राम प्रोटीन हुन्छ। हरियो बारहमासी बोटले यसलाई सँधै स्वास्थ्य-सचेत व्यक्तिहरूको मेनूमा पार्दछ। अन्य खनिजहरू र पोषक तत्वहरूमा धनी सीसको लागि पनि तरकारीहरू प्रोटीनयुक्त धनी भएकाले दैनिक खानामा समावेश गर्नुपर्दछ।
सोया तरकारी मटन भनेर चिनिन्छ किनकि यसको बनावट हुन्छ र मासु जस्तो महसुस हुन्छ। सोयामा पनि मासु जस्तो प्रोटीनको धनी सामग्री छ। यो प्रोटीन, भिटामिन र खनिजहरूले भरिएको एक तरकारी हो जुन हरेक डाईटमा समावेश गर्नुपर्दछ, शाकाहारी हो वा हुँदैन। सोया पकाइएको वा उमालेको सेवाको प्रति १०० ग्राम प्रति प्रोटीनको beg 35 ग्राम माग्दछ। त्यसकारण, सोया प्रोटीनयुक्त आहारमा आवश्यक छ।
सबै प्रकारको सिमीहरू प्रोटीन र अन्य खनिजहरूमा धनी छन्। प्रोटीनयुक्त यो तरकारीहरू खानाको समयमा वा खानाको बिचमा खान सकिन्छ। मुंग बीन्स, किडनी गेडाहरू, सेतो सिमी वा कालो गेडाहरू यी सबै प्रोटीनयुक्त छन् र स्वास्थ्यको लागि राम्रो छ। लगभग २० देखि २ 25 ग्राम प्रोटीन यी १०० ग्रामहरू मध्ये कुनै एक सेमको सेवा दिन १०० ग्राममा निहित हुन्छ। उमालेको सेम क्याम पनि आहार भोजन को रूप मा खाइन्छ किनभने यसले राम्रो मात्रामा आहार फाइबर समावेश गर्दछ।
तरकारी प्रोटीन र अन्य धेरै खनिजहरुमा धनी छ। यो स्वभावले मानिसहरूलाई दिएको एउटा वरदान हो। आर्टिचोक पोटेशियम, खनिज, आहार फाइबर र प्रोटीनहरूमा पनि धनी छ। लगभग १०० ग्राम आर्टिचोकले grams० ग्राम प्रोटीन प्रदान गर्दछ, जुन धेरै उच्च छ। आर्टिचोक एक प्रोटीनयुक्त धनी तरकारी हो र प्रोटीनयुक्त आहारमा समावेश गर्नुपर्दछ।
स्वास्थ्य सचेत मानिसहरुको मनपर्दो खाना, पालक एक सुपर खाना छ किनकि यसमा पोषक तत्वहरु प्रशस्त छन्। पालक पनि प्रोटीनयुक्त एक तरकारी हो। यसले आधा कप सामग्रीमा १ ग्राम प्रोटीन समावेश गर्दछ।
अन्य फाइदाहरू बाहेक, आलुहरूले लगभग १ देखि २ ग्राम प्रोटीनको एक कपमा सेवा गर्दछन्।
ब्रोकोलीको रूपमा उही तरकारी परिवारबाट, यसले फूलगोभीको कपमा २ ग्राम ग्राम प्रोटीन समावेश गर्दछ।
यसले एक कप सेवारि inमा १ ग्राम प्रोटीन समावेश गर्दछ, त्यसैले प्रोटीनमा धनी छ।
क्रूसिफेरस परिवारको अर्को एक, बन्दकोपमा सेवा गर्ने पूर्ण कपमा २ ग्राम प्रोटीन हुन्छ।
प्रत्येक राशि चिन्हको बारेमा केहि चीज जुन तपाईंलाई सचेत हुनु आवश्यक छ
कोर्नस्टार्च: सम्भावित स्वास्थ्य लाभ, डाउनसाइडहरू र प्रयोगहरू
कच्चा लहसुन को १० साइड इफेक्ट तपाईंले जान्नुपर्दछ
यानिना फेसनमा सोनम कपूर वा जैकलिन फर्नांडीज, तपाईंको मनपर्ने छान्नुहोस्!
गाजर एप्पल स्मूदी रेसिपी गाजर एप्पल ग्लोइंग जुस रेसिपी गर्मी विशेष स्मूथी रेसिपी
Oriflame ONE 5-in-1 रंग स्टाइलिस्ट लिपस्टिक: उत्पाद समीक्षा
10 तरीकाहरु शारीरिक रूप बाट तपाइँको भारतीय प्रेमी लाई आकर्षित गर्न को लागी
मिथुन राशिका लागि जून २०१ 2018 कुंडली भविष्यवाणी
के यो गर्भावस्थाको समयमा आंवला उपभोग गर्न सुरक्षित छ?
योगा छाती फ्याट घटाउन को लागी
क्लासिक ट्रिक्स तपाईंको प्रेमीलाई फ्याँक्न
कसरी थाहा पाउने यदि एक केटाले तपाईंलाई गोप्य रूपमा माया गर्दछ
घर विशालमा पैसा र गहना को लागी स्थान
कसरी Manchow सूप को लागि फ्राइड नूडल्स बनाउन
कसरी हिंदी मा कुखुरा परिवर्तन लाई बनाउने
जवाहरलाल नेहरू द्वारा बाल दिवसको उद्धरण
१० दिनमा दिनमा चम्किला छालाका घरेलु उपचार